जंगलमा हराएकी महिला १ बर्ष जिवित भेटिइन् : बाँच्न गरेका प्रयासको बयानले दुनियाँ च’कित ! – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / जंगलमा हराएकी महिला १ बर्ष जिवित भेटिइन् : बाँच्न गरेका प्रयासको बयानले दुनियाँ च’कित !
जंगलमा हराएकी महिला १ बर्ष जिवित भेटिइन् : बाँच्न गरेका प्रयासको बयानले दुनियाँ च’कित !
admin2days ago अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 107 Views
काठमाडौं । घुम्न जाँदा हराएकी एक महिला एक वर्षपछि फेला परेकी छिन् । अमेरिकामा क्याम्पिङ्ग गर्दा ह’राएकी ४७ वर्षीया महिला अन्ततः एक वर्ष पछि फेला परिन् ।
ति महिलालाई ड्रोनको सहयोगमा यूटाको राष्ट्रिय वनको मरुभूमिमा पत्ता लगाइएको थियो । त्यसपछि उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेर महिलालाई त्यहाँबाट सुरक्षित बा’हिर ल्याएको हो । उनलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
यूटा काउन्टी शेरिफको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा महिलाले केहि नपाएपछि घाँस खाएर आफूलाई जिउँदो राखेको उल्लेख छ । यद्यपि प्रहरीले महिलाको पहिचान सार्वज’निक गरेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार ति महिलाले आफ्नो शरीरको वजन धेरै कम गरेकी छिन् । त्यसकारण उनी धेरै शारीरिक समस्याहरुसँग संघर्ष गर्दै छिन् । प्रहरीले महिला मानसिक रुपमा पनि बि’रामी भएको दाबी गरेको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार ति महिला गत वर्ष डा’यमण्ड फोर्क क्यान्यनमा आफ्नै स्वतन्त्र इच्छामा घुम्न गईन् । यो क्षेत्र उजाड र धेरै खतरनाक छ । यो दावी गरिएको छ कि ति महिला फर्केर जाँदा बाटोमा हिंडिरहेकी थिईन् । हिड्दै जाँदा उनी अपरचित स्थानभित्र हराइन् । जब कार रोकियो उनी आ’फैंले हिंड्ने निर्णय गरिन् ।
शुरुका केही दिन, ती महिला आफुले साथमा ल्याएको पानी र खानेकुरा खाएर बाँचिन् । जब उनले लगेको सबै आवश्यक चीजहरू साथमा थिए तब उनी पानीको स्रोतको खोजीमा निस्केकी थिइन् । क’डा परिश्रमपछि उनलाई पानी पनि मिल्यो ।
आफ्नो खानेकुरा सकिएपछि ति महिलाले लामो समय घाँस खानुपर्यो । खराब खानपानका कारण उनको स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या आयो । युटाको शेरिफ विभागले नोभेम्बर २०२० मा महिलाको खोजी सुरु गर्यो । जब अमेरिकी वन सेवाका अधिकारीहरूले उनको खाली कार शिविरको मैदानमा भेट्टाए तब उनको खो’जि थालिएको थियो ।
ति महिला गत आइतबार गाडीको नजिक ड्रोनमा देखा परिन् । त्यसपछि शे’रिफ कार्यालयका अधिकारीहरू वन विभागको टोलीसमेत त्य’हाँ पुगे ।
अधिकारीहरूले भने कि हामी त्यस ठाउँमा पुगेपछि एउ’टा पाल देखियो । पाल बाहिरबाट पूरै खाली देखिन्थ्यो । जब उनीहरु पक्का गर्नका लागि पाल खोले तब त्यसमा एक महिला अर्धचेत अवस्थामा थिइन् ।
Previous यहि मंसिर १७ गते देशभर सार्वजनिक बि’दा दिने निर्णय, कारण यस्तो.
Next चितवनमा हुन् लागेको महाधिवेशनको अघिल्लो दिन इतिहाँस मै नभएको घटना भएपछि…
राष्ट्रपति भवनभित्र महिला सैनिक सहकर्मीबाट बलात्कृत
पेरिस (बीबीसी)। फ्रान्समा सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले प्यारिसस्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको भनिएको एउटा बलाfत्कारको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न …